Otu esi arụ ọrụ - NYE Countdown.com
Mbufo ama ama
Ahịa Dj Dọks maka Pro Dj na-eme LIVE gụgharia na mgbasa ozi mmekọrịta maka naanị NINE DOLLARS! Dj's nwere ike iji nkwalite na mmepụta ndị ọzọ kwalite Dj drop. Dị ka, mmetụta, ihe nzacha na Artist Shouts. Ihe Niile Dj Isi Dozichia
Ahịa Video Dj Drops nwekwara avaialble!
Tụ maka Ulo Ngwurugwu Dj Gị,
Ka igwu egwu / igwekota:
VDỌ AKA NA NT V: https://bit.ly/DjDrops9Offer
Gosi intros / mechi aru na mmetuta / Artist mkpu:
AK DRKỌ AKWCKWỌ AKCKỌ https://bit.ly/Produced-DJDrops
Looros / Mmechi / Logo Loops na ndị ọzọ:
Ihe nkiri vidio: http://bit.ly/DjDropsOffer9
AK EXKỌ BA DRB DJR DJ DRB DRR DR DVD DOP KA CAN P USR US:
(Enwere ike ịhazi ya na ihe ọ bụla ịchọrọ, ndị a bụ ụfọdụ echiche iji nyere gị aka ịmepụta nke gị!)
1. Dj Jonny Z. na ngwakọta… LIVE!
2. Ladies na nwa amadị… ọ bụ nwoke ahụ ị na-echere… Nke a bụ Dj Jonny Z.!
3. Na -adapu beat ahụ azụ na nke abụọ na abụọ… Nke a bụ Dj Jonny Z.!
4. Si na ndu (tinye obodo ma obu obodo ebe a). Ladies na Gentleman, Nnọọ… Dj Jonny Z.!
5. Gwakọta egwu kachasị mma na egwu HipHop n'ebe ọ bụla… Nke a bụ naanị ya, Dj Jonny Z.!
6. Mgbasa ozi LIVE si na okpuru ulo ya, Nke a bụ Dj Jonny Z. na Club kwarantaini.
7. Ladmụ nwanyị na nwa nwanyị, Jikere jupụta na nke naanị Dj Jonny Z.
8. Nke a bụ Dj Jonny Z. sitere na JZ Entertaiment Dj Service… Bi na nchikota!
NYE Ngụkọta ọnụ maka 2021 bụ otu n'ime ihe egwu kacha ike nke DJ na Nightclub Afọ Ọhụrụ. Anyị anọwo n'ime ụlọ ọrụ ahụ ihe karịrị afọ 20 ma gbanwee usoro nke DJ, Nightclubs na ebe nleta ndị ọzọ na -emepụta ike dị egwu na ndị na-ege ntị nha ọ bụla. Ndi n’ereputa ihe ndi NYE Nriko bu ihe ndi DJs na ndi isi ulo akwukwo n’abali / ebe nri site na mgbe ndi 1990 no. N’oge ahụ ha hụrụ n’afọ n’afọ, n’ọtụtụ ahịa na ebe dị iche iche n’akụkụ ụwa niile, na igwe mmadụ ha na ndị ahịa na-agbafu ozugbo abalị abata n’afọ ọhụrụ nke Eve. Yabụ, ha chepụtara ụzọ aghụghọ…
Nke mbu, ha mepụtara nkeji ano “Ngụgụ ahaziri NYE” n'ụdị ọdịyo. Mgbe ahụ, afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ha mepụtara 4K nke ukwuu na-ekwenye ekwenye, ọnụọgụ vidiyo na-egosipụta nke gbanwere ihe omume Afọ Ọhụrụ na ụwa dum.
Emebere NYE NYE ahaziri aha ya na akara ngosi DJ na akara ngosi nke azụmahịa n'ime agụta ha.
NYE Nchịkọta NYE na-emepụta ihe ịtụnanya “Nnọkọ abalị dum” ike na ebe a na-eme ka igwe mmadụ na-agba egwu, na-eme ihe, ma na-a drinkingụ ihe ọ drinkingụ pastụ gara aga mgbaru ọsọ nke etiti abalị iji bulie ma bulie uru na nnukwu ụlọ mmanya!
Ngụkọta NYE bụ ndebanye aha maka afọ ọ bụla maka ndị ọrụ Disc Jockeys, Mobile DJs, VJ ma ọ bụ Video Jockeys, Nightclubs, Bars, Radio Stations, Casinos, Hotels, Resorts, Pools, na ntụrụndụ ntụrụndụ.
Ngụgụ NYE nke gọọmentị dị n'asụsụ 4; IGBO, ESPAÑOL, FRANÇAIS & DEUTSCHE.
Debe Iwu Gị
Họrọ ụdị ọnụ ọgụgụ gị. Bulite akara ngosi gị, akụkụ olu olu ịchọrọ ịme ihe, usoro faịlụ, yana nhọrọ ndị ọzọ dịnụ.
Nweta mkpokọta ahaziri iche tupu afọ Afọ Ọhụrụ, EGO! (* Na nke a, awa 48-72 mgbe itinyechara iwu gị)
Ọ bụ ya! Naanị kpesie egwu na sistemụ gị na 11: 56 pm nke Afọ Ọhụrụ… ma lee anwansi na-eme n'ihu gị. Pịa egwuregwu, pụọ, ma kirie igwe mmadụ ahụ na-eme ara! (* earplugs esoghị, lol)
Bulite Logo gị
Ikike niile echekwabara © 2020 NyeCountdown.com, llc ka enyere ngwa ahịa na ọrụ ọ bụla na enweghị ikike nwebisiinka. Anyị na-enye naanị akụkụ mmemme emebere emezi & ndebiri maka DJ ọkachamara ka ịgbakọ na egwu ikikere nke ha. Ọdịnaya niile na egwu gụnyere, mana ọnweghị ọnụọgụ; na webụsaịtị a bụ maka nkwado na ngosipụta ebumnuche naanị.
Nzuzo & Iwu